တရုတ်နိုင်ငံမြေပဲခြောက်စက်၊ မြေပဲခန်းတာဝါ၊ မြေပဲခြောက်စက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ
JINFENG DRYING EQUIPMENT CO.,LTD [Liaoning,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Cert:ISO9001 ဖေါ်ပြချက်:မြေပဲခန်းခြောက်,မြေပဲခန်းခြောက်,မြေပဲခန်းခြောက်စက်,မြေပဲအတွက် Tower Dryer,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > အစေ့ခြောက်စက် > မြေပဲခန်းခြောက်
မြေပဲခန်းခြောက် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, မြေပဲခန်းခြောက်, မြေပဲခန်းခြောက် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, မြေပဲခန်းခြောက်စက် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
မျိုးစပါး parboiled ဆန်ခန်းခြောက်
Hot Blast Stove နှင့်အတူမြေပဲခန်းခြောက်စက်
ကြိမ်နှုန်းမြင့်မြေပဲ Rotary Dryer စက်
မြေပဲ Shell အခြောက်ခံပစ္စည်း
မျိုးစပါး parboiled ဆန်ခန်းခြောက် ကောက်ပဲသီးနှံခြောက်စက်ကိရိယာများဆန်စပါးသန့်ရှင်းပြီးနောက်၎င်းကိုဓာတ်လှေကားမှခြောက်သွေ့စေသည့်သီးနှံသိုလှောင်မှုအပိုင်းသို့လွှတ်လိုက်ပြီးကောက်ပဲသီးနှံများကိုအလိုအလျှောက်ထိန်းချုပ်သည်။ လေမှုတ်စက်တွင်လည်ပတ်နေသည့်စပါး၏ညှနျကွားမှုနှင့်ပူသောလေထု (လေအေး)...
ကောင်းသောစျေးနှင့်အတူအလိုအလျှောက်ထိန်းချုပ်မြေပဲခြောက်စက် အကြီးစားစက်ကိရိယာအနေဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောဘောဇဉ်ခြောက်သွေ့စက်ကိုတပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်သည်။ ပထမ ဦး စွာတပ်ဆင်သည့်နေရာသည်ယူနစ်တစ်ခုလုံး၏အလေးချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိအောင်သေချာစေရမည်။...
မြေပဲခြောက်စက်၏ထိရောက်သောထိရောက်မှု စပါးမခြောက်မီစပါးခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ၁။ ၀ င်ဗိုက်ပေါ်မတင်ဘဲ၊ အပေါ်နှင့်အောက်ဒီဇိုင်း၊ စပါးကွဲအက်မှုနှုန်းကိုလျှော့ချပြီး၊ ၂။ ကြီးမားသောခြောက်သွေ့သောနေရာ၊ ပါးလွှာသော multi-channel ခြောက်သွေ့သောအလွှာသည်ခြောက်သွေ့မှုနှင့်တစ်ပြေးညီဖြစ်စေသည်။ ၃။...
အကြီးစားစိုက်ပျိုးရေးဂျုံမှုန့်ခြောက်စက်များရောင်းရန် အပူပေးစက်သည်ဒီဇိုင်းခန်းခြောက်သွေ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အပူနည်းသောအပူပေးစနစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်မူရင်းအရောင်နှင့်အရသာကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီးအက်ကြောင်းအချိုးနည်းသည်။ ဆန်ခန်းခြောက်စက်တွင်အခြောက်ခံမျှော်စင်၊ ဓာတ်လှေကား၊ ခါးပတ်သယ်ဆောင်စက်၊...
Hot Blast Stove နှင့်အတူမြေပဲခန်းခြောက်စက် လေသည်စစ်ထုတ်စက်နှင့်အပူပေးစက်ကို ဖြတ်၍ ခြောက်သွေ့သောအခန်း၏ထိပ်ရှိပူသောလေဖြန့်ဖြူးသူထံသို့ဖြတ်သန်းသွားသည်။ လေပူသည်လေမှုတ်စက်တစ်လုံးသို့အညီအမျှ ၀ င်သွားသည်။ ပစ္စည်းအရည်သည်ထိပ်၏ဗဟိုအပေါ်ဗဟိုမှုတ်ဆေးရေမှုန်ခေါင်းသို့စုပ်ထုတ်သည်။...
ကြိမ်နှုန်းမြင့်မြေပဲ Rotary Dryer စက် ကောက်ပဲသီးနှံကောက်ရိုးခြောက်ကိုခြောက်သွေ့စေရန်အတွက်ကောက်ပဲသီးနှံခြောက်ကိုအသုံးပြုသည်။ ပြောင်းဖူးကောက်ရိုး၊ ပဲစေ့ကောက်၊ ကျယ်ပြန့်သောကောက်ရိုး၊ ပဲစေ့၊ ကောက်ပဲသီး၊ , မြေပဲစပျစ်သီးစသည်တို့) ဝိသေသလက္ခဏာများ, ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်, လိုအပ်ချက်လျှောက်ထား, ကုန်ကျစရိတ်ကိုထိန်းချုပ်, တစ် ဦး...
မြေပဲ Shell အခြောက်ခံပစ္စည်း စပါးခန်းခြောက်စက်တွင်အလိုအလျောက်ရေပါဝင်သောတိုင်းတာခြင်းကိရိယာပါသောစပါးခြောက်သွေ့သောမျှော်စင်ရှိသည်။ ကန ဦး စာဖတ်ခြင်းသည်စာဖတ်ခြင်းမှန်ကန်မှုရှိမရှိကိုစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်ပါကပြင်ဆင်သင့်သည်။ အစိုဓာတ်ကိုစမ်းသပ်သောအခါအမျိုးမျိုးကွဲပြားသောကောက်ပဲသီးနှံအနေအထားကိုချိန်ညှိ။ မမှန်နိုင်အောင်ချိန်ညှိပါ။...
ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောဆန်စပါးခန်းခြောက် ကောက်နှံခြောက်သွေ့သောစက်ကိရိယာများတပ်ဆင်ခြင်းသည်ပုံဆွဲခြင်းနှင့်အခြေခံရေးဆွဲချက်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီတင်းကြပ်စွာဖြစ်သင့်သည်။ လေမှုတ်စက်ကိုမတပ်မီက၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေး၊ ရှင်းလင်းပြီးလုံးဝသန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်သင့်သည်။...
မြေပဲအတွက်ပူပြင်းသောလေအေးပေးစက်မျှော်စင်ခြောက်စက် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကျွန်ုပ်၏တိုင်းပြည်၏အခြောက်လှန်းနည်းပညာသည်ပြည်တွင်းစျေးကွက်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်ရင့်ကျက်မှု၊ သို့သော်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကွာဟချက်အချို့ရှိနေသေးသည်။...
တည်ငြိမ်သောအလုပ်အခြေအနေမြေပဲခြောက်စက် တစ်ချိန်တည်းတွင်အမျိုးမျိုးသောအစေ့များကိုခြောက်သွေ့စေနိုင်သောအခြောက်ခံစက်များတွင်အခြောက်ခံစက်များစွာရှိသည်။ ခြောက်သွေ့သောပုံးများကိုဘေးချင်းယှဉ်။ စီစဉ်သည်။ ခြောက်သွေ့သောအမှိုက်ပုံးတစ်ခုစီကိုလေဝင်လေထွက်အပြားများဖြင့်ပတ်။ ဝိုင်းထားသည်။...
တရုတ်နိုင်ငံ မြေပဲခန်းခြောက် ပေးသွင်း
စီးပွားဖြစ်မြေပဲ Roaster စက်၏နိဒါန်း:
စက်သည်ပစ္စည်းများအတွက်တိုက်ရိုက်မီးအသုံးပြုသည့်အလျားလိုက်စည်ကင်စက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အလျားလိုက်စည်ပေါင်းဘွိုင်လာကိုယ်ထည်၊ ဒယ်အိုးထောက်ခံမှုဘောင်တစ်ခု၊ ဒယ်အိုးတစ်ချောင်း၊ ပါဝါထုတ်လွှင့်မှုအပိုင်းနှင့်အားသွင်းခြင်းနှင့်ဆေးကြောခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ roller အိုး၏ကိုယ်ထည်ကို၎င်းကိုယ်ခန္ဓာ၏ထောင့်ပေါ်တွင်ဘောင်မှတစ်ဆင့်တပ်ဆင်ပြီး roller အိုး၏ကိုယ်ထည်သည် roller shaft ပတ်ပတ်လည်တွင်လည်ပတ်နိုင်သည်။ တိုက်ရိုက်မီးအရေးယူမှုအောက်တွင် roller အိုးကိုယ်ထည်တွင်ပါ ၀ င်သောအရာများသည်အညီအမျှဖုတ်။ roller အိုး၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုညီမျှစွာအပူပေးသည်။ အဆိုပါ wok ပေါကျကှဲမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည် Arch ကိုယ်ထည်၏အထက်ပိုင်းသည်အလွယ်တကူပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ပြုပြင်ရန်အတွက်ဖြုတ်တပ်နိုင်သောခုံးတစ်ခုကိုအသုံးပြုသည်။
အခြောက်ခံစက်များသည်အစေ့များနှင့်အခွံမာများ၊ ကျန်းမာရေးထုတ်ကုန်များကုန်ကြမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ အာဟာရရှိသောကုန်ကြမ်းများပြုပြင်ခြင်း၊ တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဆေးဆိုင်များအတွက်ကုန်ကြမ်းများပြုပြင်ခြင်း၊ အမွှေးနံ့သာများ၊ , နှံစေ့၊ နှမ်းစေ့၊ ပဲ၊ ဆန်၊ သစ်ခွံ၊ ထင်းရှူးအခွံမာ၊
၁ ။ အချိန်ပေါ်သည့်အခါစက်သတိပေးလိမ့်မည်။
2. အပူအကျိုးသက်ရောက်မှုယူနီဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ စက်ကိုအဆက်မပြတ်လှည့်သည်။ နောက်ကျောနှင့်ထွက်, တက်နှင့်အောက်, အားလုံးကွဲပြားခြားနားသော ဦး တည်ချက်ကနေကောင်းစွာအပူ။
၃။ ၎င်းသည်လှော်ကျဆင်းစေသောအဆီဆီညှစ်နှုန်းကိုကြီးမားစေသည်။ အများအားဖြင့်ရေနံစာနယ်ဇင်းစက်တပ်ဆင်ထားသည်။
၄ ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန် 20 မိနစ်ခန့်လိုအပ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေ, ကင်အချိန်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ပဲပုပ်အခွံအက်ကွဲရန်မလိုအပ်ပါကမိနစ် ၂၀ ခန့်အဆင်ပြေပါသည်။ အကယ်၍ သင့်အရေပြားအက်ကွဲကြောင်းလုံးဝလိုအပ်လျှင်၊ တစ်ကြိမ်လျှင် ၄၀ မိနစ်ခန့်လိုအပ်သည်။
၅။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနိမ့်ခြင်း၊
၆။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နည်းသည်။ စက်စျေးနှုန်းသည်အလွန်နိမ့်ပြီးအသေးစားမှကြီးမားသောအထိမော်ဒယ်များစွာရှိသည်။ ဖောက်သည်များသည်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီရွေးချယ်နိုင်သည်။
ကောက်ပဲသီးနှံခြောက်စက်မျှော်စင်စိုက်ပျိုးရေးစက် Hot Sale
ချွေတာသော Recirculating Grain Dryer Processing စက်
 လိပ်စာ:Zhangxiang industrial park, qinghe district,, Tieling, Liaoning
မြေပဲအတွက် Tower Dryer
မူပိုင်ခွင့်© 2020 JINFENG DRYING EQUIPMENT CO.,LTD All rights reserved ။